မီးသင့်ကျောက် - ဝီကီပီးဒီးယား
မီးသင့်ကျောက် ဆိုသည်မှာ လက်တင်ဘာသာစကား မှ ignis ဆိုသော မီးဟူသော စကားလုံး သို့မဟုတ် magm‌a မှစတင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာသောကျောက်သည် အဓိကကျောက်ကြီးသုံးမျိုး အနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြား ကျောက်မျိုးအစားများမှာ အနည်ကျကျောက် နှင့် အသွင်ပြောင်းကျောက် များဖြစ်သည်။ မီးသင့်ကျောက်များသည် ကျောက်ရေပူများ သို့မဟုတ် ချော်ရည် များ အေးခဲခြင်း နှင့် အခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျောက်ရည်ပူများသည် ဂြိုဟ်၏ ကြားလွှာ(အလယ်လွှာ) သို့မဟုတ် အပေါ်ခွံလွှာ၌ တည်ရှိနေသောကျောက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေပျော်ခြင်း မှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အရည်ပျော်မှုသည်ဖြစ်စဉ် (၃) ခု မှ တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အပူချိန်တိုးလာခြင်း ၊ ဖိအား လျော့နည်းခြင်း (သို့) ဖွဲ့စည်းမှုပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျောက်အဖြစ်သို့ အခဲဖြစ်ပေါ်မှုသည်မြေမျက်နှာပြင်အောက်တွင် ခဲခဲ့လျှင် တိုးဝင်မီးသင့်ကျောက် သို့မဟုတ် မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခဲခဲ့လျှင် တိုးထွက်မီးသင့်ကျောက် ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ မီးသင့်ကျောက်များသည် ခရစ်စတယ်များဖြင့်ပုံဆောင်ခြင်းဖြင့် အစေ့ပုံသဏ္ဌာန်၊ ခရစ်စတယ်ပုံဆောင်ကျောက်များ သို့မဟုတ် ခရစ်စတယ်မပါဘဲဖြစ်ပေါ်ဖွဲ့စည်းလျှင် ဖန်ကဲ့သို့ ‌ကျောက်သားများဖြစ်‌‌ေါ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု သည်မီးသင့်ကျောက်များ၏အဓိကအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ (၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ဖိလစ်ပိုင်မှMayon မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု၊
Madeira မှ မီးသင့်ကျောက်များ၏ သဘာဝအတိုင်း တိုင်မြှောင်းပုံ အက်ရာ များ
၂ ဘူမိဗေဒ setting ကို
မီးသင့်ကျောက်မှားနှင့် အသွင်ပြင်ကျောက်များသည်‌ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်၏ အပေါ်ခွံလွှာ၏ထိပ်ဆုံး ၁၆ ကီလိုမီတာ (၉.၉ မိုင်) ၏ ၉၀% မှ ၉၅%ခန့် ထုထည်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည်။ ကမ္ဘာ့လက်ရှိမြေမျက်နှာပြင်၏ ၁၅% ခန့်သည် မီးသင့်ကျောက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည်။  ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာအပေါ်ယံလွှာ သည်လည်း မီးကျောက်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၎င်းတို့၏ တွင်းထွက်များ နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည်မိခင်ကျောက်မှထုတ်ယူခဲ့သည့်အောက်ပိုင်းအပေါ်ခွံလွှာသို့မဟုတ်အပေါ်ယံအပေါ်ခွံလွှာများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ၎င်းထုတ်ယူခြင်းကိုခွင့်ပြုသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားအခြေအနေများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်သည်။
၎င်းတို့၏ အကြွင်းမဲ့သက်တမ်း ကို radiometric dating ပုံစံအမျိုးမျိုးမှရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအချိန်အတိုင်းအတာကို ချိန်ညှိနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကပ်လျက်ဘူမိဗေဒ အလွှာများ နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ 
ဘူမိဗေဒ setting ကိုပြင်ဆင်
မီးသင့်ကျောက်များသည် တိုးဝင်မီးသင့်ကျောက် ( plutonic နှင့် hypabyssal) သို့မဟုတ် တိုးထွက်မီးသင့်‌‌‌ကျောက် ( volcanic ) ဟူ၍ နှစ်မျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။
</br> ၁ ။ Laccolith
</br> ၂ ။ သေးငယ်တဲ့ dike
</br> ၃ ။ ကျောက်ကပ်
</br> ၄ ။ Dike
</br> ၅ ။ ထားလိုက်ပါ
</br> ၆ ။ မီးတောင်လည်ပင်း, ပိုက်
</br> ၇ ။ Lopolith
မက်ဆာချူးဆက် တွင်တွေ့ရှိရသည့် basalt (တိုးထွက်မီးသင့်ကျောက်) နမူနာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ချန်နိုင်း မြို့ရှိတိုးဝင်မီးသင့်‌‌‌ကျောက်၏ အနီးကပ်မြင်ကွင်း
ကယ်လီဖိုးနီးယား ရှိ Sierra Nevada ရှိ Rock Creek Canyon မှ phaneritic texture ကိုပြသသည့် Gabbro နမူနာ
↑ "Global geologic maps are tectonic speedometers—Rates of rock cycling from area-age frequencies" (2008). Geological Society of America Bulletin 121 (5–6): 760–779. doi:10.1130/B26457.1. Bibcode: 2009GSAB..121..760W.
↑ 15% is the arithmetic sum of the area for intrusive plutonic rock (7%) plus the area for extrusive volcanic rock (8%).
↑ Philpott & Ague 2009.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မီးသင့်ကျောက်&oldid=702419" မှ ရယူရန်
၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။